आमासँग खुसी पनि साट्न पाएनन् रविले ! - Everest Dainik - News from Nepal
आमासँग खुसी पनि साट्न पाएनन् रविले !
काठमाडौं, पुष ११ । संसारभरिका नेपालीको मायालु बनेका रवि । नेपाल आइडल फिनालेका दिनहरु आउँदै गर्दा झनै चर्चामा आए उनी ।
सबैको अपेक्षा रवि नै नेपाल आइडल बन्ने थियो । र, यही अनुरुप उनले उपाधि पनि जिते ।
केहीले भने यो उपाधिलाई क्षेत्रीयतासँग पनि नजोडेका होइनन । तर जुन क्षेत्रको कुरा आलोचकहरुले गरेका थिए, त्यो क्षेत्र बाहिरका प्रशंसक नै रविको पक्षमा खुलेर देखिएपछि आलोचना गर्नेहरुको मुख बन्द भएको थियो ।
राजधानीबाट रवि आफ्नो गृह क्षेत्र पुगे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले उनको भव्य स्वागत र सम्मान गर्यो ।
धनगढीबाट रवि सोझै अतरिया हुँदै कञ्चनपुर लागे ।
बाटैमा पर्छ उनको घर ।
तर रविलाई प्रसंसकले यसरी पछ्याएका थिए कि उनी घर जानु भन्दा पनि कृष्णपुर हुँदै लागे महेन्द्रनगर
महेन्द्रनगरमा जनसागर नै ओर्लियो ।
रविलाई हेर्न, उनलाई बधाई भन्नेहरुको ओइरो ।
भीमदत्त नगरपालिकाले सम्मान गर्यो रविलाई ।
रवि यही खुशीको माहौलमा थिए ।
खुशी, खुशी र खुशी…।
तर उनको खुशी…
यही खुशीबीच आज बिहानै रविले अकल्पनीय समाचार सुने ।
जीवनमा पहिलोपटक यसरी खुशी पाएका थिए रविले ।
भन्थे– बुवाले धेरै दुख गरे, नेपाल फर्काउन निकै कोशिस गरे तर सकिनँ । अब भने नेपाल फर्काउँछु ।
रविको योजना बुवालाई नेपाल फर्काएर हाँसीखुसी जीवन बिताउने थियो ।
जीवनमा आमाको पीडा त उनले बाल्यकालदेखि नै भोग्दै आए ।
तर कान्छी आमा आएपछि उनको पीडामा कान्छी आमाको मायाले साथ दिएको थियो ।
आर्थिकरुपमा जे जस्तो भएपनि टुहुरो भनेर हेपिनु परेको थिएन ।
तर आज बिहान सात बजे पानी तान्ने मोटर चलाउने क्रममा उनकी आमाको मृत्यु भयो करेन्ट लागेर ।
सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी पुर्याउँदा बिहान पौने ९ बजे चिकित्सकहरुले मृत घोषित गरे ।
रविले खुसी त के अन्तिम समयमा सास छँदै आमाको मुहार सम्म हेर्न पाएनन् ।
जीवनमा कतिखेर के आइपर्छ भन्न सकिन्न ।
रविको जीवनमा पनि यस्तै भए ।
अब परिवारको थप जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा थपिएको छ ।
एकातिर नेपाल आइडलले ल्याएको जिम्मेवारी, अर्कोतर्फ आमा नहुँदा र बा भारत भएकोले घरको दायित्व ।
रविको जीवनको यो संघर्ष जति दारुण छ, त्यति लोभलाग्दो उनको कला ।
अब यो कलाले उनको पीडामा मल्हम लगाउन सकोस
जीवनका पीडा बिर्सेर संघर्षपथमा अघि बढन साहस देओस
हार्दिक श्रद्दासुमन रविको आमाप्रति